Maamulka Hirshabeelle oo heshiis la galay Dowladda Federaalka - Halbeeg News
MUQDISHO (HALBEEG) – Madaxwaynaha Maamulka Hirshabeelle Maxamad Cabdi Waare oo goor dhoweyd shir-jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in heshiis laga gaaray khilaafkii siyaasadeed ee u dhexeeyey Maamulka Hirshabeelle iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Waare ayaa shirkiisa jaraa’id ku xusay in la xalliyey tabashooyinkii uu qabay Maamulka Hirshabeelle, sidaas darteed hadda kaddib ay wadashaqayn fiican la yeelan doonaan Dowladda Dhexe.
“Waxaa laga heshiiyey tabashooyinkii gaarka ahaa ee Hirshabeelle ay Dowladda Federaalka u qabtay, sidaas daraaddeed Dowlad Goboleedka Hirshabeelle waxa uu Dowladda Federaalka la yeelan doonaa wada shaqayn buuxda” ayuu yiri.
Madaxwaynaha Hirshabeelle ayaa ugu dambayntii ugu baaqay Dowladda Federaalka in ay wadahadal la furto maamul goboleedyada kale, isagoo xusay in dhankooda ay ka go’an tahay sidii arrintaas xal kama dambeys ah looga gaari lahaa.
Taas isagoo sharraxaya waxaa hadalladiisii kamid ahaa “Dowlad Goboleedka Hirshabeelle waxay ugu baaqaysaa Dowladda Federaalka in ay wadahadal la furto dowlad goboleedyada kale”
Kow iyo toban beri kahor ayey ahayd markii madaxda Maamul Goboleedyada oo shirkoodii saddexaad ku yeeshay magaalada Kismaayo ay si wadajir ah u shaaciyeen inay xiriirka u jareen Dowladda Federaalka Soomaaliya, inta dowladdu wax ka qabanayso cabashooyinka maamullada.
10 askari oo ciidamada Jubbaland ka tirsanaa oo qarax miino lagu dilay